Jesoa Kristy no tokony apetraka ho fototra | FJKM Amboniloha
« Fa Izy no nihavian’izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony; Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amena. »
Mpampiantra mpikaroka momba ny teolojia iray nody avy niasa no nitotra kilalao ho an’ireto zananany. Irony kisarisary amboarina atao hoe « Puzzle » irony ilay izy.
« Saritanin’izao tontolo izao io hoy izy ». Faly ery ireto zanany satria kilalao sady mahazatra azy ny « Puzzle » no tiany rahateo. Teo anatrehan’izany anefa dia faly sahiirana ihany izy ireo : tena sarotra ity « Puzzle » iray ity, ilay zokiny aza moa leo ny farany dia lasa nijery kilalao hafa hatao. Ilay zandriny kosa niezaka teo ihany, nahodiny ka nahodiny ireo baoritra kely atabotabatra, farany natsoiny ilay zokiny, Nahita sarin’olona mantsy izy tao ambadik’ilay baoritra fonony.
« Hitako ny vahaoloana » hoy izy. « Ity sary olona ato abadika ity no ataontsika, dia azontsika ho azy ilay saritanin’izao tontolo izao ».
Rehefa nandamina minitra vitsy izy ireo dia nivoaka ilay sary olona izay tsy iza fa sarin’i Jesoa. Ary rehefa vita tanteraka ny fametrahana ny kasinga tsirairay, dia faly izy ireo fa nivoaka ihany koa ilay saritanin’izao tontolo izao. Nantsoin’izireo ny rainy mba hijery ny zava-bitany. Ilay rainy kosa nampianatra hoe toa izany ny zava miafin’ny fianarana ny Soratra Masina, i Jesoa Kristy no tokony apetraka ho fototra, avy eo manaraka ho azy ny zavatra rehetra.
Catégories :	Dimy minitra, Soratra Masina	/ par AnjGab 23 octobre 2015